एक ग्राफिक डिजाइन परियोजना को लागी दाँया टाइपफेस छनौट | क्रिएटिव अनलाइन
प्रोजेक्टमा दायाँ फन्ट छनोट गर्दै
रूप प्रारूप महत्वपूर्ण छ, टाइपोग्राफीको रूपमा रंगहरू एक डिजाइन काम मा। र हामी सबैलाई अहिले नै थाहा छ, टाइपोग्राफी प्रयोग गर्नुहोस् हास्य सेन्स यो धेरै सफल छैन। तपाईंले चलाउनुहुने कार्य मोडेलमा निर्भर गर्दै, एउटा वा अर्को बढी सफल हुनेछ। यो हामी प्रस्तुत गरिरहनु भएको ब्राण्डको छवि दिनको कारण हो।
एक फास्ट फूड रेस्टुरेन्ट को लागी एक टाइपफेस समान छैन एक उडान कम्पनी को लागी भन्दा। केहि अझ बढी जोसका साथ हुनेछ, अरूलाई बढी सामर्थ्य वा ती हुन पनि आवश्यक पर्दछ ईटालिक वा बरु बढी व्यवस्थित। हामी यहाँ केहि राम्रा सुझावहरु दिइरहेका छौं विभिन्न प्रोजेक्टहरूका लागि उत्तम फन्टहरू छनौट गर्न।
2 प्रदर्शन विचार गर्नुहोस्
3 कठोरतापूर्वक परीक्षण गर्नुहोस्
4 दृश्य र टोनल दिशा
5 हाम्रो वरिपरि टाइपफेस
हामीले परिचयमा भनेझैँ हरेकले पाउनेछ फरक व्यक्तित्व। गुगलले आफूलाई कोका-कोलाबाट भिन्न गर्न चाहनेछ, जस्तो कि क्रिएटिव अनलाइन बाट यो गर्नेछ आईफोन समाचार.
प्रोजेक्ट सुरू गर्नु अघि, मानहरू र शब्दहरूको बारेमा सोच्नुहोस् जुन भावनालाई वर्णन गर्दछ हामी के सिर्जना गर्न चाहन्छौं भन्ने बारे। उदाहरण को लागी, डिजाइन अनुकूल, स्मार्ट, वा सुरक्षित हुनेछ? सबै प्रकारका सार्वजनिक वा एक विशिष्टको लागि केन्द्रित? स्पष्ट विचार प्राप्त गर्न आफैलाई तीन गुणहरूमा सीमित गर्नुहोस् तपाईको स्रोतको दिशामा। एक मैत्री फन्ट गोलाकार र साँच्चै सुवाच्य हुन सक्छ। बीमा कोणीय हुन सक्छ।
प्रदर्शन विचार गर्नुहोस्
यो छनौट गरिएको फन्ट सुरक्षित छ भनेर निश्चित गर्न लायक हुन्छ वेबको लागि र ब्राउजरमा पूर्ण रूपमा रेन्डर गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं एक राम्रो फन्ट लाइब्रेरी वा वेब-सुरक्षित फन्ट फाइल (OTF) प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रो फन्ट नेटवर्क-सुरक्षित हुनुपर्छ।
यहाँ विचार गर्न दोस्रो तत्व प्रदर्शन हो। गुगल फन्ट वा Adobe typekit जस्ता पुस्तकालय प्रयोग गर्नाले सबै कुरा ठीक भएको निश्चित गर्दछ र तपाईं राम्रो प्रदर्शनको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं यसलाई एक बाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ वेब फन्ट निश्चित गर्नुहोस् कि यसले सबै वर्णहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ भविष्यमा। यदि तपाईं आफैंमा केवल अक्षरहरू र संख्याहरूमा सीमित गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई उद्बोधन चिन्हहरू वा फन्ट प्याकेजबाट हराइरहेको बिभिन्न प्रकारहरू सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ।
कठोरतापूर्वक परीक्षण गर्नुहोस्
परियोजनामा ​​सान्दर्भिक फार्महरूमा तपाइँको प्रकारको परीक्षण गर्नुहोस्। तपाईंलाई थाहा छैन कि कुनै टाइपफेसले काम गर्दछ जब सम्म तपाईंले यो सही आकारमा देख्नुहुन्न र यदि स्पेसि worksले काम गर्दछ। तपाइँलाई यो कस्तो देखिनेछ भनेर एक यथार्थवादी विचारको आवश्यक छ, जुन तपाइँ प्राय: नक्कली ल्याटिनबाट प्राप्त गर्नुहुन्न।
दृश्य र टोनल दिशा
भिजुअल दिशा फन्ट हो र यो कस्तो देखिन्छ, जबकि टोनल एक सन्देश बनाउन शब्दहरूको व्यवस्था हो। दुबै तत्वहरू आपसमा मेलमिलाप र सहानुभूति देखाउनु पर्छ। स्रोतले के भन्छ भनेर बुझ्नको लागि हामीले पहिले निर्णय गरेका मानहरू प्रयोग गरौं र सन्देशमा कस्तो देखिन्छ जब तपाईं यसलाई लेखिएकोसँग तुलना गर्नुभयो। सही फन्टले शब्दहरूलाई यसरी विस्तार गर्न सक्छ, त्यसैले फन्टको दृश्य विशेषताहरू काम गर्नको लागि महत्वपूर्ण छन्।
विचार गर्नुपर्ने केही विशेषताहरू तौल हुन्, गोलोई, लम्बाई, र फन्ट अक्षरबाट अक्षरमा प्रवाहित हुने तरीका। तिनीहरू सेरिफ, सेन्स-सेरिफ, ड्यास, वा हातले खिचेका शैलीहरू बीच फाँटिन सक्छन्। फन्टको प्रत्येक व्यक्तित्व भावना वा सन्देश जगाउन मद्दत गर्दछ।
हाम्रो वरिपरि टाइपफेस
टाइपोग्राफी जताततै छ। अधिक तपाईले यसलाई तपाईको वरिपरि देख्न थाल्नुहुन्छ, र तपाई के गर्नुहुन्छ र के मनपर्दैन निर्णय गर्नुहोस्, फन्ट छनौट गर्दा तपाईले जति बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एक डिजाइनर वा शौकको रूपमा, तपाईं टाईपफेसको बारेमा सबै समयमा सचेत हुनुपर्दछ। यो त्यस्तो चीज हुन सक्दैन जुन हाम्रो दिमागमा केवल जब हामी वास्तवमै चाहिन्छ। हामीले हाम्रो प्रोजेक्टको साथ सफल हुनको लागि प्रेरणाको रूपमा हेर्नुपर्दछ।
सोशल मिडियामा #hasthags अनुसरण गर्नुहोस्, फन्टहरूको बारेमा ब्लगहरू पढ्नुहोस्, विभिन्न भ्रमण गर्नुहोस् वेब फन्टहरू र बाहिर जानुहुँदा आँखा खोलिनुहोस्। अरूको खराबसँग केहीको राम्रो कामको तुलना गर्नुहोस्, चित्रहरु लिनुहोस् र साथीहरु संग असफलता र सफलताहरु तुलना। सुरुमा हामीले जति धेरै नोटिस गर्छौं, डिजाईन गर्ने काममा जति धेरै हामी पछि जान्ने छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रोजेक्टमा दायाँ फन्ट छनोट गर्दै
प्रत्येक कामको लागि उत्तम र color्ग प्यालेट